Indonesia in Focus: Kaalinta dalxiis jecel dunida.
Kaalinta dalxiis jecel dunida.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (379)
(Qaybta saddex boqol iyo toddoba iyo sagaal), Depok, West Java, Indonesia, September 6, 2015, 1:40 pm).
Horraantii 1982, ka dib markii aan ka tago isagoo Addoona rayidka ah ee Agaasinka Guud ee Wasaaradda Tacliinta Sare ee Waxbarashada iyo Dhaqanka, oo aan markii ugu horeysay booqanaya ama dibedda, sababtoo ah waxay doonayaan dugsiga ee California State University, Fresno, California.
Waayo, aabbahay iyo hooyaday iyo sagaal iyo walaalahiinna waxaan gelbinayaan dhex Halim Perdana Kusuma International Airport, marka Indonesia ma laha garoonka Soekarno-Hatta ah. Markii aan saqaf diyaarada ee Japan Airlines (JAL) Jumbo 747, waaweyn diyaaradaha heerka laba-a, ayaa sabtidii wadada ugu Changi Airport, Singapore iyo Narita Airport, Tokyo, ka hor inta sii dhinaca duulimaadka San Francisco Tokyo. Laga soo bilaabo San Francisco Waxaan fuulay diyaarada magaalada Fresno Air California. Ugu Fresno garoonka diyaaradaha, waxaan Waalid korsaday Bob mooday iyo xaaskiisa (Dee) sababta oo ah waxaan ku nool yihiin qoyskan oo muddo dhawr bilood ah, ka hor inta aan u guureen guri ayaa ku dhow Masjid Fresno, kaas oo ku sugnaa oo kaliya 50 mitir ka campus ee California State University soo gaaray, Fresno.
Sida la Indonesia (Jakarta), marka ma aha oo casri ah sida ay hadda tahay, oo aan suuqyada badan (suuqa super), ma jiraan wax toll road, sidaa darteed marka aan joojiyay in gaadiidka ee diyaaradaha isbedel Changi Airport dadka kale JAL, inkastoo ilaa seddex saacadood oo kaliya, ayaan isticmaali agagaarka Changi garoomada , Marka garoonka diyaaradaha casriga Changi mar hore, waxaa jira jid ay ku socdaan, jaranjarada diyaaradaha jirridda iyo dhismaha cammiran waxaa ka buuxsamay alaabaha kala duwan oo aan loo leeyahay Halim Perdana Kusuma.
Aan jeclaa kecanggigan oo hore casriga ah garoonka diyaaradaha Changi, Waxaan jeclahay inaan ka soo baxaya tuulada weyn (Jakarta), dhinaca magaalada gobolka sida Singapore ah. Waxaan u socday Tokyo ka Singapore, kadis ah macluumaadka aan ka heli diyaarad, shisheeye kasta oo gaadiidka ee Tokyo, oo lagu siiyay fiiso ah oo lacag la'aan ah si ay u booqdaan Japan muddo saddex maalmood ah. Peumpang kasta JAL dhinaca dalalka shisheeye iyo gaadiidka ee Tokyo, abaal-hiilaadka JAL joogo free saddex maalmood Nikko Hotel ee Narita.
Waxaan u isticmaali fursaddan si ay u booqdaan goobaha dalxiiska ee kala duwan ee magaalada Tokyo. Marka ugu horaysa ee uu soo degay Garoonka Diyaaradaha Narita ayaa galay guga, taas oo kaliya xilliga qaboobaha go'aysa, halkan waxaan dareemayaa dareen qabow (qabow) markii ugu horaysay ee dalka baraf sida Japan. Laga soo bilaabo garoonka diyaaradaha Narita waxaannu Slaam magaalooyinkooda oo heerkoodu sareeyo baska Tokyo (magaalada waagu), ilaa magaalo magaalada waagu ee Tokyo, waxaan ka diiwaan in hay'adda socdaalka maxalliga ah ka eryay noo eegto meelo dalxiiska kala duwan ee Tokyo, laga bilaabo baxna NHK Tower, doonta loo fuulo safar webiga u kala qaybinaya ah magaalada Tokyo, halkaas oo la shuqul luul macmal ah samaynta, Japanese Emperor ee madaxtooyada, halkaas oo Warung shaaha, iyo meelo kale oo dalxiis. Waxaan aad ula ka Tokyo (hadda ku nool 40 million, ay shabaqa mar, iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee aan abid soo booqday sida Osaka. From Osaka in ay na geeyo tareen degdeg ah Tokyo. Tokyo in kastoo dadku ku badan yihiin, waxaan marar dhif ah la kulmaan ciriiriga on wadada (gaadiidka Jam) , malaha maxaa yeelay Tokyo uu leeyahay nidaam casri ah dadweynaha gaadiidka, laga bilaabo mara (Jidka sub), tareenada monorail iyo xarumaha kale ee gaadiidka dadweynaha yihiin gaadiidka wanaagsan oo si fiican u habeysan.
Safar kale meelaha aan ku sameeyey ahayd ku maqnaa ee xagaagan, sida caadiga ah xarumood ee bisha June (xagaaga) ardayda waxaa laga yaabaa in off, iyo ardayda raba inay sii wadi college (muddo gaaban) waxaa sidoo kale loo ogol yahay. Unversitas inta badan ka barato Maraykanka waxaa jira afar xilli, simistarka jiilaalka, gu ', xagaa, iyo badh dayrta ee xilli ciyaareedka. In semester xagaaga ee 1983, waxaan manfatkan in ay socdaan hareeraha America. Early xagaaga waxaan ka Malaysia (Hishamuddin) hitchhiked ardayda gaarka ah ee ardayga, oo uu ka bartay ee Fresno kharash u gaar ah halkii ay deeq waxbarasho MARA. Laga soo bilaabo Fresno in San Francisco in ay qaataan saddex saacadood, mid ka mid ah la aqonsado ee magaaladan waa naqshadaha ee deggan guriga, waxaa ay saameyn ku dhaqanka naqshadda ee Germany, France, England, Holland Ireland iyo dhaqanka asal Yurub oo kale, idinkoo kala garanaya magaalada waxaa ay deggan yihiin dadka soo socda ka dhaqamo badan oo kala duwan oo Yurub , sidoo kale ee Shiinaha (China Town), Filibiin iyo dalal kale oo badan.
Laga soo bilaabo San Francisco waxaynnu ku baadhi xeebaha California, magaalada Los Angeles, shan saacadood, magaaladan waxaan helnay in Disney Land iyo goobo badan oo dalxiis oo kale. Waxaan marnaba qaaday magaalada San Diego, halkan waxaan ku arki karin World Badda iyo dalxiiska kale badda. Bilood ilaa laba iyo xagaaga saddexaad waxaan isku dayay inaan u safray isticmaalaya bas (Grey Hound), la tikidhada xilli tigidh sax ah laba bilood, taasoo la micno ah in tikidhada xilli bas aan karaa beddelo-isbedelka ee terminal baska aan iibsato tigidh cusub. Itineraries aanu Fresno in Los Angeles, ka Los Angeles waxaan u socday Tucson oo magaalada ka mid ah Phoenix Arizona, ka dibna si Dallas iyo Houston, Texas, in Texas aan u socday magaalada Ceel Paso, El Paso waxaan u gudbay magaalada Trijiudad Juarez (Mexico). Laga soo bilaabo Texas aan madax Albuqaque, Alabama hor jeeda Missouri, waxaana ay markaas ku Virginia, oo ah magaalada Philadelphia, ka hor magaalada ka mid ah New York. Kasta goobaha magaalada iyo dalxiiska ee gobolka aanu waqtiga si aad u aragto, mararka qaar, sababtoo ah ma jirto gaadiidka dadweynaha aan joojiyo kemdaraan gaarka ah si ay goobaha dalxiiska (wax afduubaan).
Waqtigaas, dalxiisayaasha shihseeye ayaa weli loo ogol yahay inay fuulaan Taallada of Liberty kor saaraa madaxa taalada (hadda laga mamnuucay). Marka ay weli waxaa jiray WTC dhismaha mataanaha, dabaqa sare waxaa la siiyaa dadka dalxiisayaasha ah. Ka hor inta aan Philadelphia, waxaan ay awoodaan in ay soo booqdaan Washington DC. Inta lagu guda jiro safar dheer oo aan kaliya la seexday saldhigga arau baska baska, kaliya musqusha tago alaabtiisu labiska ah oo halkaas, iyo qubeysiga, rugtan. Waxaan ku qaataan habeenka (sii joogo hotel), markii uu soo gaaray magaalada New York, sii joogo ka Youth Hostel hal-toban, baasaboorada iyo qiimaha leh kaydad hore ee Xafiiska. La fahmi karo qolalka degan dalxiisayaal nin dhalinyaro ah oo ka France, Germany, Mexico iyo dalalka kale, (markii uu qiimihiisu $ 3 joogo habeen aad u qaali ahayn gaar ahaan marka qiimaha sarrifka ahaa $ 1:. RP 500, -
Marka magaalada Memphis waxaan arkay gurigaas ka dhigay Elvis Presley Museum. In Hound Bus Grey ka Tour aan ka tago raad ee dalalka koonfurta New York guriga caleenta gobolada waqooyiga, ka hor inta uusan ku laaban Fresno. Si ka duwan Maraykanka, taas oo ah mid aad u ballaaran (50 gobol), halka wadamada Yurub waa dal yar, sida dalka ee aan abid soo booqday sida Netherlands, Germany, Austria, Hungary, iyo Spain. Dalkan aan booqday tempay soo jiidashada badan, sida Berlin, Humburg, Amsterdam, Hague, Budapest, Vienna, Madrid, Sevilla, iyo goobaha dalxiiska kale sida meesha Islam mar meesha ka boqortooyooyinka ee Spain iyo meelo kale oo dalxiis.
Safray dalka Maraykanka ka duwan yahay haddii aan baska loo isticmaalo, in Europe aan u isticmaalno tareenno dheeraad ah. Haddii inta lagu jiro Maraykanka waxaan haddii doonayaan in ay cunaan cuntada kosher tagno (suuqa mini) dukaanka ay leeyihiin Muslim deegaanka ama Muslim ka Pakistan, Hindiya iyo Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, ka dibna Europe dalxiisayaasha Muslim inta badan booqo retaurant (maqaayad) in maamula Muslimiinta deegaanka ama Muslimiinta ka soo jeeda dalka Turkiga ayaa si weyn loo sii faafin, Europe, gaar ahaan Germany iyo France.
Kaalinta dalxiis jecel in duna
Fasax waa wax aad u wacan yahay, gaar ahaan haddii ay qorsheynayaan in ay qaataan fasaxyadooda dibadda. Waa hagaag halkan waxaan ka hadli doonaa meelo dalxiis oo xiiso leh adduunka oo dhan.
riteen dalka cherry walxaha Safaro Japan waa in xiiso leh. Waxaa jira meelo badan oo ka mid ah Japan ahaayeen jiitay oo booqasho. Haddii aad qorsheyneysid inaad waxaa hesho, waxaa jira wax badan oo ka mid ah adeegyada hage safar oo aad u horseedi doonaa in ay ku raaxeystaan ​​quruxda Japan. 1.Ueno Park la ubaxyadii cherry Japan caanka ah waa mid aad u qurux badan. Haddii aad rabto in aad ku raaxaysan quruxda ubax this, yimaadaan si ay sababtay mooganaanta Park guga ka dhacay agagaarka March si May. Mooganaanta Park ayaa ah meesha ugu caansan oo ahayd goob ka mid ah Japan ayaa dalxiis ugu jecel yahay in la sameeyo hanami, kuwaas oo geeduhu halka riyaaqayaa ubaxa ubax cherry ah.
2. Fuji-Q Highland Dalxiiska Japan this hal foom oo beeraha ee Miyeyydaan wax u adeega ee raacid ugu xiiso, mid ka mid ah taas oo Siriyalka in uu yahay mid aad u sarreeya leh dhabbihii dheer ah. Mooganaanta Park ayaa ah meesha ugu caansan oo ahayd goob ka mid ah Japan ayaa dalxiis ugu jecel yahay in la sameeyo hanami, kuwaas oo geeduhu halka riyaaqayaa ubaxa ubax cherry ah.
3. Disney Resort, Tokyo park ee Miyeyydaan wax lagu dhisay magaalada Tokyo, badan raacid in aan halkan ku raaxaysan karaan, haa tahay u badan tahay in aan wax badan ka duwan kuwii Dufaan Ancol, Jakarta, Indonesia ee Miyeyydaan wax aan magacooda la kala saari karaan pemaianan Air, Dayuurada, Coster, waxaa laga yaabaa oo keliya goob keenta in ay soo jiidasho leh Japan. Laakiin markii u arkaan ka soo magaca "Disney" muuqataa dheeraad ah oo buuxda.
Netherlands The lama yaqaan kaliya ee warshad bur laga sameeyo oo kaliya. Netherlands waa mid ka mid ah meelo dalxiiska ah oo caan ah oo adduunka ah. Waxaa aad dareemi kartaa dagganaashiyaha ee ku hareeraysan dabiiciga ah ee ku jirta meelaha jannada. Dadka waxaa ka saaxiibtinimo iyo wax fiican. Waxaad si fudud u tarayo goobaha kirada fasax. Doorashada sida guryaha fasaxa kirada ah, inay idinka caawiyaan la yareeyo kharashka inta aad joogtid. 1. Volendam Mid ka mid ah jiidashada dalxiiska caanka ah ee Netherlands waa in Valendam., Xaggee baynu sawirada la dhar 'londo' ah ala kalluumaysatada dugsiga jir qaadan kartaa. Haa, Volendam la soo dhaafay waa tuulo kalluumaysiga ah, laakiin waxa uu haatan noqday mid ka mid ah jiidashada ugu dalxiisayaasha shisheeye booqanaya Netherlands. Volendam waxa uu ku yaalaa Ijsserlmeer biyaha badda woqooyi xuduud. Haddii laga Airport International Amsterdam Schipol wuxuu ku saabsan yahay 30 km oo ka magaalada laftiisa Amsterdaam wuxuu ku saabsan yahay 20 km. Originally Volendam waa in goobta dekedda ah ee Edam, magaalada cheese soo saara ee Holland ah. Marka Edam dhiso ay dekedda u gaar ah, Volendam ka dibna way iska kala jejebiyey, oo la aasaasay Tuulada kalluumaysiga ah Volendam. Jawiga iyo guryo Volendam ahaa qurux badan, nadiif ah oo si fiican loo dayactiro. In kasta oo guriga yar yar iyo wada, milkiilayaasha aadka u muuqda guriga waa in uu leeyahay daryeelka guriga iyo lingkungannnya si fiican. Hore 2. Keukenhof, Lisse Mid ka mid ah meelo dalxiiska ee Holland kaas oo sidoo kale ay ka qiimo in ay soo booqdaan waa Keukenhof ah, indhaha sida beerta botanical ama beer ubax. Jiidashada Dutch this mid ka mid ah oo ku yaalla magaalada ka mid ah Lisse, Keukenhof waxa uu ku yaalaa xagga koonfureed oo reer Netherlands, kuwaas oo magaalada ka mid ah Lisse, 30 daqiiqo bas ka Amsterdam. Park la meel ka mid ah qiyaastii 80 hektar, oo taasuna waa wax beerta ugu weyn ubax ee Yurub, sidaa darteed waxaa la magac daray The Garden of Europe. Maaha wax lala yaabo, Keukenhof waxa uu noqday mid ka mid ah meelaha loo dalxiiso ee ugu caansan dalka Netherlands. Iyada oo ku saleysan macluumaadka aan helay, kasta baxaa ka badan toddoba milyan oo ubax ayaa la rijeynaya in ay soo jiidan doonto dalxiisayaasha ah. Waa in la ogaadaa in aan kaliya tulips loogu raaxaysan karaa, laakiin sidoo kale noocyada kala duwan ee ubax sida Rinkeby, daffodils, xitaa orchids. In ka badan 800,000 oo soo booqda guriga iyo gaadhi si park sanad kasta. Wixii ku caashaqa oo ubax iyo kuwii ku jeclaa oo ah sawir, sharciga 'waajib' si ay u booqdaan Keukenhof. Iyo in la hubiyo in aad soo camera ah in lagu soo qabto quruxda beer ubax this. 3. Canal Cruise, Amsterdam Amsterdam waa meel ugu soo booqday ee Europe la malaayiin visitors yimid inay magaalada baadhaan, oo qurux badan sanad kasta. Tani waa magaalo aad u fiican loo qorsheeyay, qarnigii 17aad magaalada waa xarunta dhaqaale ee dunida iyo maanta magaalada xisbiga ee Europe ah. Tani ma tahay magaalo aad u weyn oo dhan soo jiidashada ugu weyn ee magaalada si fudud waa la heli karo oo lugaynaya. Magaalada Tani waa boorish kaamil ah taariikhda iyo naqshadda dhismaha casriga ah. Magaalada waxa uu ku faanaa in ay deegaanka dulqaad iyo deeqsinimo ah. Tira-koob ku hadla waxaan ahay ma haysaa xogta saxda ah, laakiin magaaladan dhaafto magaalooyinka waaweyn ee Europe ee tirada baaskiilada, kanaalada, buundooyinka, tiyaatarada, suuqyada iwm Waqtiga ugu wanaagsan si ay u booqdaan Amsterdam Waqtiga ugu wanaagsan si ay u booqdaan Amsterdam waa July iyo August, sababo la xiriira cimilada bilaha waa kuwa ugu fiican. In kasta oo aan marnaba xad-dhaaf ah, Amsterdam waa marsada ah ee soo booqda sanadka oo dhan. Xitaa booqanaya Amsterdam bedelayaa waa in ay leeyihiin faa'iidooyin gaar ah sida aad ka heli doonaa qiimo dhimis weyn oo dhan diyaaradaha, hoteelada iyo makhaayadaha. In Amsterdam waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah ciidaha iyo dhacdooyinka ku sii meel qaado sannadka oo dhan. In Amsterdam, Netherlands, waxaa jira safar ay weheliyaan channel biyaha taas oo ah mid aad u cajiib ah dalxiisayaasha ah. Tour yeedhi dalxiisayaal ogaan jawiga magaalada Amsterdam webiga jiinkiisa. Magaca safar ku qalaadu waa inuusan waxba in tani ay tahay Canal Amsterdam ee Cruise.
Ku noqo theme ee safarka, markan qaar ka mid ah indhaha ku tahay in la booqday haddii aad tahay qof ee Gobolka Faransiis waan kuu sheegi doonaa. Meelahan soo socda ayaa waxaa looga baahan yahay in soo socda safar marka aad booqato ee Gobolka Faransiis 1. Eiffel Tower ayaa, Paris Dabcan, kaalinta dalxiis ugu horeysay soo jiitay indhaha dad badan oo mudan in khasab ah aad soo booqato waa Tower Eiffel ah. Meeshan ah malaayiin dad badan oo ka mid ah lammaanaha wanaagsan doonayaa in ay soo gudbiyaan, jacaylka express, Malabka, iwm Maxaa yeelay, Eiffel Tower laftiisa waxaa la dhisay sanadihii u dhexeeya 1887 sampat 1889 si ay ugu dabaal qarnigii ah Revolution Faransiis ah leh height a of 275 mitir. Si kastaba ma nyesel deh halkan yimaado gaar ahaan halka keeno lamaanahaaga 2. Louvre, Paris Louvre uu noqday ugu caansan oo dhan meelo lagu daawado farshaxanka, oo waxay hoy u tahay farshaxanka iyo taariikhda badan aad luli kartaa baguette ah. Leonardo da Vinci Mona Lisa dhoola (La Giaconda) ilko caddayn ballaaran ee noocoodu yahay, laakiin waad ogaan doontaa in ka badan 35,000 oo gogo 'oo kale halkan, ka qadiimiga in farshaxanka casriga ah. Tip Bonus, isagoo intaa ku daray ah Ahraamta Louvre casriga ah, soo jiidashada sharaf Faransiiska la Baydka Masar (oo loo isticmaalo sida meel oo ka mid ah Xeerka Da Vinci). 3. Palace ee Versailles, Versailles Guuritaanka ka Paris iyo in ay gudaha waxaan ka heli Palace ee Versailles guriga ah oo ay boqorro iyo boqorado ee France ilaa iyo La Guillotine madaxooda qaado,. Palace ayaa weli ah oo ay tahay hab la yaab leh in maalintii la Hall of Muraayadaha, jardiinooyin heer sare ah iyo ilo, iyo biyo ku hareereysan ku qaataan oo ay magaalada in uu leeyahay qaar ka mid ah maqaayadaha ugu fiican ee degaanka (oo ay ku jiraan Paris). 4. French Riviera, Cannes iyo Monaco French Riviera waa meel xeebta u jecel glitterati ah, iyadoo qaar ka mid ah xeebaha ugu qalaad ee dunida ugu taageerayaan qaar ka mid ah hoteelada ugu raaxo leh, fursadaha cuntada iyo jeediya shopping in laga helo meel kasta oo caalamka. Cimilada kulul yahay xilliga qaboobaha iyo kulul xagaagii, laakiin ma seegi Film ee Cannes iyo xiddigaha adduunka filimka haddii aad kasta oo suurta gal.
English caan ku tahay kubada cagta oo keliya ma aha oo kaliya. Laakiin, dabcan, dukaamada badan taariikhda iyo meelaha xiisaha in ay soo booqdaan. Haddii aad fursad u leeyihiin in ay yimaadaan UK, qaar ka mid ah meelaha iyo hawlo xiiso leh waa la booqan karaa. 1. Tower of London Tower of London, oo ku yaalla bartamaha London waa relic ka mid ah taariikhda iyo soo shaqeeyay qoyska boqortooyada boqolaal sannadood. Ka sokow munaaraddan sidoo kale xabsi, maqsinka hubka iyo xitaa zoo ah. Munaaraddii Tani waxay sidoo kale hoy u tahay taajkii boqornimada, si aad u arki karto. Munaaraddii wuxuu furan yahay Talaadada dhex Saturday laga bilaabo 10:00 si 18:00 waqtiga deegaanka. Iyada oo khidmadda lagu soo galo oo ah 17 euros (oo ku saabsan Rp..230 kun) ah waxaad booqan kartaa mid ka mid ah meelaha ay soo booqdaan dalxiisayaal badan oo tan. 2. Tower Bridge, London Qaab iyo goobaha ugu fiican ee caasimada, Tower Bridge ee magaalada London ayaa istaagay on Thames tan iyo 1894 iyo mid ka mid ah calaamadaha lagu yaqaanay dunida oo dhan. Halkan waxa aad ka arki kartaa habab iyo darfihiisuba isagay macluumaad sharax ku saabsan farsamada la isticmaalay sanadihii la soo dhaafay si ay u dhawrto Tower Bridge dhaqaaqo. Meeshan maalin kasta Waxaad booqan kartaa laga bilaabo 10:00 si 18:30 oo uu mushaar 7 euros (oo ku saabsan Rp.95 kun). 3. Big Ben munaaraddii Big Ben ayaa muddo dheer tan iyo markii uu noqday icon ah oo magaalada london. A dhismaha saacadda weyn oo ku yaalla dhamaadka waqooyi ee Palace of Westminster ee magaalada London Tani waa munaaraddii seddexaad ee ugu saacad adduunka. Haddii ay tahay in London, ma laga yaabaa in aad ka maqnaan fursad ay ku daawadaan saacad bilaabay sax on 31 May 1859 this. In view fiidkii ah iyo munaaraddayda dheer ah 96,3 mitirka noqon doontaa mid ka qurux badan, maxaa yeelay, qurxiyey nalalka jaalaha ah oo dahab ah oo ka mid ah Palace ee Westminster. Big Ben mar ahaa dhismaha saacadda ugu weyn afar dhinac oo adduunka ah, laakiin markaas adkaaday Allen-Bradley Clock Tower in Milwaukee, Wisconsin, USA.
United Arab Emirates uu leeyahay laba dowladood magaalada taariikhi ah, kuwaas oo Abu Dhabi iyo Dubai. Faa'iidooyinka dalxiiska leedahay Dubai, maxaa yeelay, Dubai ku tiirsanaa ganacsiga iyo maalgashiga adeegyada loogu talagalay kobaca dhaqaalaha. Tani waa in la barbardhigo Abu Dhabi oo ay ku tiirsan yihiin ganacsiga saliid. Sidaas halkan waxaan ku sameeyay liiska qaar ka mid ah meelo dalxiiska fiican
1. Burj Al Arab Burj Al Arab waa hotel raaxo ku yaala Dubai, United Arab Emirates ah. Burj Al Arab dhismaha, loogu talagalay by Tom Wright, gaadho height ah 321 mitir, 66 dabaq iyo waa dhismaha ugu dheer si buuxda sida hotel loo isticmaalo. Dhismaha taagan jasiirad macmal ah oo ku yaalla 280 m xeebaha Gacanka reer Faaris ahaa. Burj Al Arab waxaa iska leh Jumeirah. Hoteelka ayaa waxaa inta badan lagu tilmaamo inuu yahay xiddiga 7. Waxaa loo arkaa buunbuunin ah kuwa duurka ku ah dalxiiska. Waxaa sidoo kale loo arkay in ay tahay hab lagu "garaacday" ayuu hotels kale oo la odhan xiddiga uu hotel 6. 2. Jumeirah Beach Jumeirah Beach waa xeebta caanka ah ee Dubai. Tani waxay ku kala xeebta ilaa 7 km, qaybsan todoba xeebaha iyo xeebta walba iskala dheer miles. 2 Beach dhisnayd ee Jumeirah Park kasta, iyo Wild Wadi. 3. Burj Khalifa Burj Khalifa ayaa tusaale u ah naqshadda dhismaha ee ugu sarreeya uguna cajiib ah. Towers, 153 dabaq samada magaalada Dubai xiriiri sare. Dhismaha waxaa ka mid ah qeybo ka mid ah hotel ku, dhismaha xafiiska, Apartment Residential oo dhan goobaha tamashle. 4. Palm Jumeirah Palm Jumeirah uu leeyahay wax walba oo aad u baahan tahay in ay ku raaxaystaan ​​fasax cajiib ah. Ay ka mid yihiin magacyada reer binu hotel adduunka caan ah, meelaha dalxiiska waa mid cajiib ah, raaxo fashion iyo shopping suuqyada. Haddii aad dooneyso in aad isku dejiso, ama naftaada quusin in fasax buuxa oo ah madadaalada madadaalada iyo, taasi waa meel si dhab ah u Waxyoon in ay soo booqdaan. Waddooyinka Café Ismaris In Armenia Armenia waa dal oo aan ka fog ee dalalka Yurub oo si la Turkey. Inkasta oo dalka waa arrin u gaar ah, sababtoo ah sida gobolka ugu horreeyey ee Christian adduunka, laakiin uu dareensan yahay in dalka aan cuntada ee Armenia arkay ma aha wax badan ka duwan inta badan guud ahaan sida oo ka mid ah dalalka Yurub. Kibis iyo fuud maraqa, ama Baastada mar walba si fudud u heli. Dadka halkan sidoo kale jecel yahay inuu cuno miraha
3. Armenia / Republic of Armenia
5. waa dal buuraley ah ee gobolka South Caucasus ee Eurasia. Oo ku yaalla qaybta waqooyi ee West Asia, xuduud la Turkey galbeed, Georgia iyo ilaa xagga woqooyi. Armenia waa dhexe, xisbiyada badan, Burma dimuqraadi ah:. Tan iyo qarnigii 9aad ilaa qarnigii 13aad magaaladan ahayd caasimadda ah ee boqortooyada jaahilka, boqortooyadii ugu horeysay ee mideeya gobollada kaas oo noqon doona Myanmar casriga ah. Intii lagu guda jiray qarnigii, waxaa jira in ka badan 10,000 oo macbudyo iyo pagodas Yangon sidoo kale loo yaqaan Rangoon, waa caasimadda hore ee Burma (Myanmar) iyo caasimadda ah ee Yangon Gobolka. Yangon waa magaalada ugu weyn ee dalka ku nool yihiin in ka badan shan milyan, oo waa xarunta magaca ganacsi agan City of Bagan (oo hore loo odhan jaahilka) waa magaalo guun ah (magaalada jir) ee ku yaalla gobolka Mandalay in Myanmar / Burma. Tan iyo qarnigii 9aad ilaa qarnigii 13aad magaaladan ahayd caasimadda ah ee boqortooyada jaahilka,
9. waa dal oo dadka diinta Buddhist intooda badan, laakiin magaalada Yangon waxaan ka arki karnaa Mala'igtu kiniisadda Catholic lahaa aad buu u gaboobay. Saint Mary ee Cathedral waa kaniisad ah oo gaboobay Catholic ku yaalla Hotel qolka kala cayncayn ah kaabsal bannaan, taas oo macnaheedu yahay kaliya balastar ah kaliya ku haboon oo kaliya rebaan hurdo laga heli karaa dalal badan sida Japan, Singapore ama Malaysia. Hoteelka ayaa kaabsal aad rabto in aad ka heli cawayska
13. badan oo meelo! dhab ahaan wax badan! Hadda aad rabto in aad hesho meel aad go'aansato nooca madadaalada? haddii aad rabto si aad u hesho madadaalo sida suuqa habeennimadii oo kala duwan waxaad ka arki kartaa iyada oo video hoose (marka lagu daro sawirrada sida ku cad maqaal hore), meesha ay tani tahay in Nelson Street, marka aad ka tago saldhigga MTR Waxaa jiri doona tilmaamo uga baxdo Gaadiidka si Macao ka Hong Kong wax walba waa maalin kasta iyo wax walba waa saacad kasta, si aadan in aad walwasho, si toos ah u tagaan si ay counter ah, gadato tikidh, sugtaa saacad uu ka baxay, ka dibna u tageen inay Macau. Sida xaqiiqada ah rabnaa in aad ogaato sida ay u ka Hong Kong u hesho in ay Macau, note ugu horeysay ee waa mid aad u fudud. Gaadiidka Macao ka Hong Kong waa had iyo jeer waxaa maalin kasta iyo wax walba waa kasta macao Macao ama Macau horeba waa magaalo ay ka buuxaan madadaalada, oo ku yaalla gobolka Guangdong xuduud ah oo ku yaalla waqooyiga iyo soo food Shiinaha South badda. Magaalada waxaa haatan ma aha mid sir ah sharciyeeyo in dunidu khamaarka meelaha ugu quruxda badan ee adduunka meelaha ugu quruxda badan ee adduunka caan ka ah - World yihiin kuwo aad u ballaaran oo runtii aan qiyaaso sida badan oo dalxiis jiidashada in la booqan karaa dal kasta oo dunida ah oo laga yaabaa haddii aad rabto in aad soo booqato mid mid sida xaqiiqada ah waxay qaadataa waqti aad u dheer, oo xataa hadday awoodaan. Marka hadalka ku saabsan meelaha dalxiiska ee adduunka ugu waa mid aad u kala duwan iyo sidoo kale leeyahay qurux ah oo kala duwan, laakiin waxaa jira qaar ka mid ah oo u maleynayaa in ay jiraan qaar ka mid ah goobaha aan qurux gaar ah oo caan ah oo adduunka ah, laakiin dib u soo jiita dadka dalxiisayaasha ah, in kastoo qurux ayaa ah mid aad u xiiso laakiin ma laha visitors badan oo dheeraad ah oo macnaheedu yahay in si fiican u yaqaan in indhaha dunida ahayn?, iyo haddii ay leedahay wax badan oo soo booqda ee ka socda caalamka u hubsan karaa in goobaha ay dhab ahaan yihiin kuwo aad u caan ah. Waa hagaag, waa kuwan qaar ka mid ah macluumaadka kaalinta dalxiis ugu quruxda badan qabi dalka walba sidii sepengatuhan horay baan ahaa dhibco dalxiis caanka ah ee adduunka.
17. Kuta Beach Bali waxa uu ku yaalaa xagga koonfureed oo reer Denpasar, Bali ee caasimadda Jamhuuriyadda Indonesia waxay bixisaa qurux wayn ee xeebaha iyo si fiican u yaqaan in ay indhaha dunida.
21. Waxa loogu yeedho Komodo Island waa jasiirad helay xoolo badan dhif ah waxaa ilaaliya gobolka ee Jamhuuriyadda Indonesia. On Komodo jasiiradda in waxa uu ku yaalaa Nusa Tenggara Islands hufan ee bari ee jasiiradda of Sumbawa lagu daro riyaaqayaa quruxda dabiiciga ah ee jasiiradda ah ayaa sidoo kale ku raaxaysan karaan muuqaal dabiiciga ah ee xayawaanka duurjoogta ah in ay yihiin dhif ah ayaa lagu ogaaday in dawacooyinka. Buur Bromo qurux cajiib ah buurta oo ay leedahay Buur Bromo Eebana waa soo jiitaan dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa shisheeye.
23. Buur Bromo
25. waxaad kula kulmi kartaa in Probolinggo, Bariga Java, Indonesia. 2. Japan ee Buur iyo bootinta dheer Mount Fuji, ee ku taalla soohdinta reer Shizouka iyo Yamanashi Prefecture sidoo kale waa wax layaab leh in ay booqdaan dadka dalxiisayaasha ah. Mountains in ay leeyihiin sifooyinka in dhamaadka la lakabka ah ee barafka waa baraha dalxiis ugu qurxoon dunida caanka ah. Inta badan Places Beautiful ee adduunka caan ka ah
27. mooganaanta Park
29. A beerta mar qurux badan ka buuxsamay ubax caadiga ah ee Japan sameeyey jawi cusub galay dalxiis ah oo dhab ahaan aad u cajiib ah. Mooganaanta Park waa beer aad u weyn oo ku yaalla Tokyo Japan iyo waa mid ka mid ah baraha dalxiis caanka ah ee adduunka.
33. dhac waxa uu leeyahay qurux aad u weyn cajiib ah u soo booqda. Dhac in ku taala xuduud caalami ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada waa bar caan dalxiis adduunka iyo soo booqda dad badan oo doonaya in ay arkaan quruxda dhac waa mid aad u cajiib ah. Grand Canyon Grand Canyon waa waadi badan oo ay abuureen River Colorado. Kaalinta dalxiis Tani waa bar dalxiis caan ah oo inta badan soo booqdaan kooxda martida ka kala duwan Negar, sababta oo ah waxa uu dareensan yahay in qurux dabiici ah la yaab leh ma dhergi doontaa haddii booqanaya soo jiidashada, kuwaas oo hal mar oo keliya. Biciidka Canyon meesha dalxiis ugu quruxda badan ee America ee soo socda waa biciid Canyon, waadi meeshiisiina waa tan dalxiis sidoo kale waa mid aad u caanka ah ee indhaha u ah ee dunida, iyadoo quruxda darbiyada waxaa lagu shiday sida fallaaraha qorraxda ka dhigi qolka gudaha noqdo aad u qurux badan oo soo jiidasho badan. Biciidka Canyon waxa uu ku yaalaa Page, Coconino Country, Arizona, United States.
35. jiidashada Lake Degmada dalxiiska ee UK ay tani waa buur in uu leeyahay gudubno weyn, dalxiisayaal badan oo soo jiidashada dalxiiska sida degmada Lake ee UK. Cambridge jawi yaab Cambridge UK iyada oo leh muuqaal webiga iyo dhismayaasha hore weli in ay si fiican u hayo.
39. Haddii Thailand waxaa jira dad badan oo ay maciin bixiya qurux fiican dabiiciga ah iyo rag caan ah oo adduunka ah mid ka mid ah Chang Koh ah. Yag park badda ahaa mid aad isugu at this visitors Thailad oo dunida ku baahsan, sababta oo ah quruxda meesha waa xasilloon oo nabad ah si ay u sameeyaan dalxiisayaasha dareemaan guriga kaalinta dalxiis ah. Koh Samui in Koh Samui waa kaalinta dalxiis in sidoo kale soo jiitay dalxiisayaal badan oo shisheeye gaar ahaan inta lagu jiro xagaaga si xaqiiqa ah dalxiisayaal badan oo soo booqda meesha ah. Mong Kok waa shopping ugu dhameystiran oo adag
43. Bilawga Westgate ee, iibsan ilaa meesha la degan yahay, booqashada Mongkok
Posted by needsjobslowongankerja at 12:51 PM